Sekuyisikhathi eside ososayensi kungase kutholakale ukuthi izifundo ebhukuda ungomunye amafomu engcono umzimba abantu. Ngakho-ke, kuze kube manje akukho pool, okwakuyoholela nalutho. Kuyinto elula kakhulu ukubhukuda echibini zasendlini, njengoba lapha ungahamba iyiphi inkathi yonyaka. Ukubhukuda akuyona kuphela ewusizo, Uphakamise kwemizwa futhi uzizwe kahle. Futhi induduzo kanye nomthelela esiphezulu kwabesifazane kwanele ukhethe Swimsuit kuhle kwechibi, amadoda - ukuncibilika. Ake sicabangele ngokuningiliziwe umehluko phakathi ezemidlalo sezimpahla zokubhukuda ogwini, futhi kanjani hhayi ukuba aphanjaniswe bakwazi ukuzikhethela abayithandayo.
izinhlobo sezimpahla zokubhukuda
Ngokusho wochwepheshe, evamile swimsuits zonke zabesifazane zihlukaniswe zibe:
Kusihlwa, izintokazi ukuthi ukugqoka iqembu ebhishi noma ephathini echibini. Ngokuvamile sezimpahla zokubhukuda enjengalena yayenziwa izindwangu ezibizayo kakhulu, lace ukuhlobisa, zinhlayiya, imigexo emihle. Lolu hlobo yingenxa hhayi ukubhukuda, kodwa ukuziqhakambisa umnikazi wakhe.
Beach. Lolu khetho zokugqoka eziphumulele ogwini, ubhukuda emanzini zemvelo. Umehluko phakathi kwalezi swimsuits "okukhuthazela" yakhe: indwangu kufanele kube ukumelana namanzi anosawoti, emisebe yama-UV, futhi umbala akumelwe fade elangeni. Ngokuvamile benziwe ezinemibala egqamile futhi ehlotshiswe iyiphi izakhi okuhlobisa: izintambo zezicathulo enhle, izinkinobho, izinkintsho, ubuhlalu noma sequins. Ngezinye izikhathi engeza ruffles ukwakha isithombe romantic.
swimsuits Racing ngenxa pool zenzelwe ezemidlalo asebenzayo. Lapha, kugcizelelwa hhayi imihlobiso, kanye nesitayela ukhululekile futhi kuyaqina ijwabu. Abakhiqizi ukukhiqiza into izingubo ezihlukahlukene imibala nezitayela, kodwa mncintiswano zisebenzisa shades imnene ngaphandle mikhondo ezimibalabala.
Izimfuneko Ezemidlalo swimwears
Sezimpahla zokubhukuda ngenxa pool kumele ukuhlangabezana namazinga ikhwalithi anezici evumela umnikazi walo ukugxila kuphela umzimba.
Omunye umehluko wemisindo nemiqondo yamagama ezibaluleke kakhulu, ukuze ngazo kufanele sinake indaba. Ezimweni eziningi, imicengezi ngoba umshini ohlanza amanzi usebenzisa ane-chlorine noma Izingxube yalo, lapho kuqukethwe. Lo msuka chemical kuba nomphumela omubi kakhulu nokwakheka kwezicubu, ukuze evamile lolwandle inketho Swimsuit ngokushesha ukuwohloka.
Ngokuphathelene yokwakheka ezibonakalayo, abakhiqizi isetshenziswa ngokuyinhloko esikhathini polyamide. Kulo elikhiphe yekhwalithi ephezulu ukugeza amasudi ngoba zibhukuda edamini. Ngezinye izikhathi i-ukukhiqizwa yabo esetshenziswa inhlanganisela polyamide futhi lycra noma i-polyester futhi PBT. Umehluko phakathi lawa maqembu amabili ukuthi owokuqala ikhuthaza kuyaqina enkulu kwezicubu cababa ezinhle phezu kwesimo umkhiqizo. A Indlela yesibili livikela kakhulu chlorine ukuze imicu.
izitayela okuqinile futhi ehlukile
Njengamanje, ezemidlalo sezimpahla zokubhukuda ngenxa pool emakethe ezihlukahlukene omkhulu. Zonke lezi zinhlobo netindlela evamile ezahlukene ngamaqembu amabili main. Phakathi kwabo:
One Piece Swimsuits - lokhu ingenye izitayela ezidumile iningi ezemidlalo izingubo for ukubhukuda. Lesi sitayela kusiza ukunyakaza okusheshayo amanzi, ngakho-ke wakhethwa ochwepheshe ngokwabo. Futhi okuqinile sezimpahla zokubhukuda abesifazane bathanda amgqokele amanzi Ukuvivinya umzimba ngendlela amakilasi, njengoba azikuncishi ukunyakaza. Izimfuneko nezemidlalo ezifana: kumele kube ukhululekile, hhayi zibangele noma iyiphi ukucasuka kwesikhumba, musa basihlikihle, kanye ukuqinisekisa ukuthi noma iyiphi ingxenye yomzimba echayeke ngesikhathi ukunyakaza kungazelelwe.
sezimpahla zokubhukuda Hlukanisa. Sine engqondweni akuyona ubhodisi abavamile futhi panties, kanye nemidlalo-isitayela bodice amafushane, okuyinto zifakwa nge bands ekhethekile zenjoloba. sezimpahla zokubhukuda Hlukanisa ngenxa pool kufanelekile amantombazane usinamathelise kuphela, ngoba ngosizo yayo akunakwenzeka ukufihla isisindo esengeziwe.
Umumo One Piece Swimsuits
sezimpahla zokubhukuda Esizwakalayo ebhukuda ichibi zona zihlukaniswe zibe lezi zinhlobo ezilandelayo:
Swimsuit nge emuva evulekile. inketho okunjalo ngempela kusho khona ezizibeni mncane ukuthi kungase kushintshwe. Fashion ochwepheshe ukweluleka ukukhetha lesi sitayela amantombazane nge amabele encane. Uma isifuba inkulu, kufanele ukhethe Swimsuit, eye esakhelwe ukwesekwa kule ndawo bodice. Kwezinye onobuhle, ungabona wayibhinca engu- oqhubeka amabele kangcono ngisho.
Swimsuit nge ezizibeni ebanzi ngemuva. Uma kuthiwa sawela, lezi onobuhle zifane wrestling. Yiziphi kuhle? Okokuqala, 'ukubambana' ukugeza amasudi abafana nalaba besifazane yemfashini, ngoba muhle ukugcizelela isithunzi sibalo. Okwesibili, ezizibeni ububanzi uvumele Swimsuit ezikubambayo umzimba, okusho ukuthi kulungile ukuba baqeqeshe futhi bazizwa beqiniseka emanzini. Futhi, ezizibeni musa uthathe isikhumba musa basihlikihle it, njengoba kunjalo ezizibeni mncane. Omunye izinzuzo - support okuhle amabele.
Sezimpahla zokubhukuda ngenxa pool ivaliwe, ngokukhethekile, nge emuva avaliwe. Kepha Imi, kuba ngesimo amathonsi noma umphimbo kungenziwa ivaliwe ngokuphelele. uziphu Front lingakhiwa, yikuphi okulula ukugqoka Swimsuit. Lokhu isitayela esezisejwayele izintokazi ne isisindo okweqile - kuyasiza ukufihla amaphutha, ngamanye amazwi, kunomphumela sculpting.
Okufanele funa uma uthenga?
Ngaphambi kokuba uthenge sezimpahla zokubhukuda kufanele bacabangele izinto ezimbalwa ukuze kamuva kube okubaluleke kakhulu:
Uma udinga ukusekelwa okukhethekile webele, kubalulekile ukukhetha Swimsuit ngenxa pool, elithatha ulwelwesi ezengeziwe, ukwakha inkomishi. Futhi uma kungekho izinkomishi, ungakhetha Swimsuit kusuka impahla aminyene kakhulu nge ezizibeni ububanzi.
okuqukethwe Decent ku Lycra impahla kwenza umnikazi ngaphezulu mncane ngenxa ukulungiswa ezindaweni inkinga. Ngezinye izikhathi kulezi amasudi ukugeza kungaba faka elikhethekile kuleyo ndawo besisu.
Kuyaphawuleka ukuthi Swimsuit pool nge izinkomishi isekela webele hhayi kuphela, kodwa futhi inikeza ngayo isivikelo phakathi ukubhukuda fast and ingcindezi amanzi.
umehluko wemisindo nemiqondo yamagama ekhethekile
Lapho ekhetha isudi ukugeza futhi kufanele akhumbule ukukhula akhawunti. Uma intombazane akuyona okusezingeni eliphezulu, kungcono uthenge usayizi Swimsuit ezincane, kanye izintokazi eliphezulu kakhulu sinake usayizi omkhudlwana. Nokho, asikwazi Ungeqisi it: likhulu kakhulu kuzoholela yokuthi ezizibeni ngeke iba namandla ekilasini, kanti uma incane ngeke bavumele ukugajwa isikhumba ukucasuka ukushiya.
Kubhekwe aphakeme abakhiqizi izinga ezemidlalo sezimpahla zokubhukuda efana Beach Bunny, Imfihlo kaVictoria, Caffe, Maaji nabanye. Lezi zinkampani omethembayo abadlali futhi uthenge izinto zabo ukuze mncintiswano sina.
Indlela yokwenza imifushane yemfashini kusuka ku-jeans
Ukukhangisa nokuxhumana komphakathi. Izindlela zokukhangisa. Ukuthuthukiswa kobudlelwane bomphakathi
I ovulekile umnotho emhlabeni namuhla
Izindlela siphungule ekhaya: indlela discolor izinwele nge-hydrogen peroxide